वर्षाका दिन अभिलेखहरू - IntoKildare
चीज गर्न को लागी
सामान्यतया बिदाको दिन भिजेको दिन भनेको धेरै काम नगरी भित्र आश्रय गर्नु हो। सौभाग्यवश हामी आयरल्याण्डमा एक वा दुई दिन वर्षा हुने बानी परेका छौं र तपाईंले धेरै इनडोर गतिविधिहरू र बच्चाहरू र वयस्कहरूका लागि आकर्षणहरू फेला पार्नुहुनेछ।
किलदारे जस्तो कतै छैन, जब घाम चम्कन्छ। अचम्मको पैदल यात्रा ट्रेल्सबाट, सुन्दर नहरहरू र आयरल्याण्डको प्राचीन पूर्वको पुरानो अवशेषहरू सम्म, Throughbred काउन्टी साँच्चै उत्कृष्ट छ! तर यसको सामना गरौं, हामीले वर्षाका दिनहरूमा हाम्रो उचित हिस्सा पाउँछौं, र हामी सधैं भिजेको दिनमा वेलहरू दान गर्न तयार हुँदैनौं। खराब मौसमले हाम्रो मनोबललाई कम गर्न दिनुको सट्टा, आज Into Kildare मा, हामीले पानी परेको बेला Kildare मा गर्नका लागि सबै भन्दा राम्रो चीजहरू जम्मा गरेका छौं!
एयरटास्टिक मनोरन्जन केन्द्र सेलब्रिज
बलिङ, मिनी गल्फ, मनोरञ्जन आर्केड र सफ्ट प्ले संग सबै उमेरका लागि रमाइलो। साइट मा अमेरिकी शैली रेस्टुरेन्ट।
Ardclough गाउँ केन्द्र
Ardclough गाउँ केन्द्र 'माल्ट देखि भोल्ट' घरहरु - एक प्रदर्शनी जो आर्थर गिनीज को कहानी बताउँछ।
Ballymore Eustace कला स्टुडियो
क्षेत्रहरू, वन्यजन्तु र निवासी कुखुराहरूले घेरिएको स्टुडियोले सबै उमेरका लागि कला कक्षाहरू र कार्यशालाहरू प्रदान गर्दछ।
पारम्परिक नहर बार्जमा किल्डारे ग्रामीण इलाकामा आरामदायी क्रूज लिनुहोस् र जलमार्गहरूका कथाहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
Crookstown क्राफ्ट गाउँ
एक लुकेको मणि कुम्हार, कलाकार र शिल्पकारहरु बाट हस्तनिर्मित उपहार वस्तुहरु को विशाल सरणी बेच्न। अनसाइट क्याफे र डेली।
डी ब्रोफी सजावटी प्राचीन वस्तुहरु
प्राचीन सजावटी प्रकाश, दर्पण, कपडा, फर्नीचर र उद्धार आइटम को एक चयन संग सही उपहार पाउनुहोस्।
सिरेमिक कला स्टुडियो र कफी पट्टी जहाँ आगन्तुकहरु आफ्नो छनौट आइटम रंग र एक उपहार वा उपहार को रूप मा व्यक्तिगत स्पर्श थप्न सक्नुहुन्छ।
जोनस्टाउन गार्डन केन्द्र
आयरल्याण्ड को सबैभन्दा ठूलो बिरुवा चयन र एक उज्ज्वल हावायुक्त आधुनिक शपिंग वातावरण मा गार्डन स्टोर, एक क्याफे र क्याफे गार्डन।
जुनियर आइन्स्टाइन किल्डरे
जुनियर आइन्स्टाइन किल्डारे एक पुरस्कार विजेता ह्यान्ड्स-अन रोमाञ्चक, आकर्षक, प्रयोगात्मक, व्यावहारिक, अन्तरक्रियात्मक STEM अनुभवहरू प्रदान गर्ने प्रदायक हुन्, व्यावसायिक रूपमा एक संरचित, सुरक्षित, पर्यवेक्षित, शैक्षिक र रमाईलो वातावरणमा डेलिभर गरिएका तिनीहरूका सेवाहरू समावेश छन्; […]
के फुर्सद नास
बहु पुरस्कार विजेता फुर्सत क्लब र 25m स्विमिंग पूल, स्पा, फिटनेस कक्षाहरु र सबै को लागी उपलब्ध खगोल पिच संग जिम।
रमाईलो को घण्टा को लागी KBowl बलिling, Wacky विश्व बच्चाहरु को खेल क्षेत्र, KZone र KDiner संग हुन को लागी ठाउँ हो।
साहसिक र गतिविधिहरूक्याफेहरू
Kilcock कला ग्यालरी
1978 पछि Kildare को प्रमुख ग्यालरी, आयरल्याण्ड स्थापित कलाकारहरु को धेरै द्वारा कलाकृतिहरु प्रदर्शन।
Kildare टाउन विरासत केन्द्र
Kildare टाउन हेरिटेज केन्द्र एक रोमाञ्चक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी को माध्यम बाट आयरल्याण्ड को सबैभन्दा पुराना शहरहरु मध्ये एक को कहानी बताउँछ।
किल्डारे गाउँमा लक्जरी ओपन-एयर शपिंगको आनन्द लिनुहोस्, १०० बुटिकले उल्लेखनीय बचतहरू प्रदान गर्दै पूरा गर्नुहोस्।
Kildare को किंवदंतियों
भर्चुअल वास्तविकता अनुभव आयरल्याण्ड को सबैभन्दा पुरानो शहरहरु मध्ये एक मा एक भावनात्मक र जादुई यात्रा मा समय मा फिर्ता परिवहन।
Newbridge Silverware आगन्तुक केन्द्र एक समकालीन दुकानदार स्वर्ग प्रसिद्ध शैली प्रतीक र अद्वितीय कारखाना भ्रमण को संग्रहालय विशेषता हो।
विरासत र इतिहासक्याफेहरू
बहु अनुशासनात्मक कला केन्द्र थिएटर, संगीत, ओपेरा, हास्य र दृश्य कला प्रदर्शन।
शैकलटन संग्रहालय अथी
संग्रहालय आवास दुनिया मा एक मात्र स्थायी प्रदर्शनी अर्नेस्ट शैकलटन, महान ध्रुवीय अन्वेषक को समर्पित।
सन् १९५० को दशकमा नासलाई नाटक र टेबल टेनिसका लागि उपयुक्त सुविधा उपलब्ध गराउन मोट क्लब बनाइएको थियो। मोट थिएटरको निर्माणले पहिले […]
व्हाइटवाटर किनमेल केन्द्र
Whitewater आयरल्याण्ड मा सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय किनमेल केन्द्र र 70 भन्दा धेरै महान स्टोरहरु को घर हो।